आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधिअनुसार फूलपाती भित्र्याउँदै मनाइँदैछ ।
घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दसैँघर अथवा पूजाकोठामा शुभसाइतको प्रतीकका रूपमा फूलपाती भित्र्याउने प्रचलन छ ।
नवपत्रिकाको नामले समेत चिनिने फूलपाती नौ देवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याई शास्त्रीय विधिअनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको छ ।
शास्त्रीय मान्यता अनुसार फूलपातीको रुपमा नौ थरीका फूलपाती भित्र्याउने गरिएको छ ।
कदली दाढिमी धान्या हरिद्रा मानकं कचु : ।
विल्वशोका जयन्ती च विज्ञेया नवपत्रिका ।।
शास्त्रहरुका अनुसार नवपत्रिका(फूलताती) को रुपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र अन्य नयाँ पालुवासमेत दशै घरमा राख्ने गरिन्छ ।
यी नौ किसिमका वनस्पपतिका क्रमश : ब्रह्मायणी, रक्तदन्तिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुण्डा, कालिका, शिवा, शोकहारिणी र कात्र्तिकी देवीलाई आह्वान गरेर पूजा गरिन्छ ।
यस वर्षको निमित्त फूलपाती भित्र्याउनका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्धारण गरेको साइत बिहान ७ बजेर ११ मिनेटमा छ । त्यस्तै विहान १० बजेर २४ देखि ११ बजेर ५४ मिनेटसम्ममा शुभ समय मानिएको छ । तर कतिपय क्षेत्रमा भने बेलुका फूलपाती भित्र्याउने प्रचलन रहेको छ ।
आज सातौं दिन शक्ति कालरात्रिको नामद्वारा प्रसिद्ध छ । नवरात्री पर्व अर्थात दुर्गापूजाको सातौं दिन माता कालरात्रिको उपासना गर्ने दिन हो । यस दिन स्थापना र प्राणप्रतिष्ठा गरिएकी कालरात्रिको भोलिपल्ट अष्टमीको मध्यरात्रीमा तान्त्रिक पद्धतिले विशेष पूजाआज गरि विसर्जन गर्ने प्रचलन छ ।
सूर्य नमस्कार गर्नुस्, अनेकौं रोगबाट छुटकारा पाउनुस्
'हिन्दू' शब्दको खोज कसले गर्यो ? [रोचक तथ्यसहित]
स्वास्थ्यका लागि तातो पानीले नुहाएको ठीक कि चिसोले ?
यी ५ काम जसले बनाउछ मुटु तन्दुरुस्त
दोलखाको भीमेश्वरको शिलामा ‘पसिना’ आएपछि प्रशासनले भन्यो–पूजापाठ गरियो, राष्ट्रपतिलाई प्रसाद पठाइन्छ